အဆက်မပြတ်သင်သည်အားကစားကစားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းသောပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ဒီတစ်စုံလင်သော option ကိုပြေးသို့မဟုတ်ဥပမာ, ဖြစ်ပါတယ် သည့်ကြံ့ခိုင်ရေး , ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကမတတ်နိုင်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာလူများ၏အများစုများအတွက်အားကစားရုံသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေးကလပ်သို့သွားရောက်ကမတတ်နိုင်နှင့်လေးနက်သောကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေဆဲရှိပါတယ်လျှင်, နှင့်ပြေးအကြောင်းကိုလည်းမေ့လျော့စေနိုင်သည်။ ဤအအခက်အခဲများနှင့်အတူဤအားကစားသျောနည်းနည်း contraindications ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းနီးပါးများအတွက်ယေဘုယျအတွက်သင့်လျော်သောကြောင့်။ ဒီနေ့ကအရမ်းလူကြိုက်များ Nordic လမ်းလျှောက်အတော်ပင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှကူညီပေးပါမည်
ဘယ်လိုအသုံးဝင် Nordic လမ်းလျှောက်?
နော်ဒစ်လမ်းလျှောက်မကြာခဏသမားရိုးကျနှင်းလျှောစီးထမ်းဘိုးကိုအသုံးပြုအထူးတုတ်သုံးပြီးလမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်မုန်း၏အပိုကီလိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရနိုင်သိပ္ပံပညာရှင်များကသက်သေပြအဖြစ်အားကစားဒီမျိုး။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းထမ်းဘိုးနှင့်အတူ Nordic လျှောက်လှမ်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပါသည်:
အဆိုပါသင်တန်းများလည်းသက်ရှိများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်ဟူသောပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်ကျင်းပကြသည်မှတပါးကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းဟာသွေးခုန်နှုန်း quickens စဉ်အတွင်းအသက်ရှူပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြစ်လာသည်ဟူသောအချက်ကိုမှ, သင့်အဆုတ်, တစ်အများကြီးပိုကောင်းလေဝင်လေထွက်စတင်ဖို့။
သိသိသာသာအားဖြင့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချခြင်း, ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါက, နှလုံးသွေးကြောစနစ်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာသွေးစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အာရုံကြောစနစ်ထမ်းဘိုးနှင့်အတူအလွန်အသုံးဝင်သော Nordic လျှောက်လှမ်းခြင်း။ ပုံမှန်ကျန်းမာအိပ်ပျော်ခြင်းပြုပြင်အာရုံကြောခိုင်မာစေ, စိတ်ကျရောဂါဖြတ်သန်းပါတယ်။
ထိုသို့သောဆီးချို, ရင်သားကင်ဆာ, အူမကြီးကင်ဆာအဖြစ်အလေးအနက်ရောဂါများအန္တရာယ်လျော့နည်းစေသည်။
နော်ဒစ်လမ်းလျှောက်သည့် musculoskeletal စနစ်ဖြင့်ပြဿနာများရှိသည်သောလူတို့အဘို့အကြံပြုသည်။
နော်ဒစ်လျှောက်လှမ်းခြင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ရုံတစျနာရီအစည်းအဝေးများ 500 ကယ်လိုရီအထိမီးမရှို့နိုင်ပါ။
ကျောရိုးအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှု, တိုးတက်ကောင်းမွန် ကိုယ်ဟန်အနေအထား ။
နော်ဒစ်လျှောက်လှမ်းခြင်း varicose သွေးပြန်ကြောဘို့အကြံပြုသည်။ အမှန်မှာထိုကဲ့သို့လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာခြေထောက်ကြွက်သားတွေလျှော့ချနေကြပြီး, ကြောင့်ဤဖြတ်တောက်မှု၏သွေးပြန်ကြောထဲမှာအသှေးကိုအလျင်အမြန်နှလုံးမှကြွလာ, ထိုသို့သောအားဖြင့်သူတို့ကိုအတွက်ဖိအားသက်သာရာ။
တုတ်နှင့်အတူ Contraindications Nordic လမ်းလျှောက်
အားကစားဒီလိုမျိုး၏ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုနေသော်လည်းနှင်းလျှောစီးထမ်းဘိုးနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သင်အားကစားရုံသွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရန် contraindications ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်:
သင်က postoperative ကာလ၌လမ်းလျှောက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။
ဒါဟာမဆိုနာတာရှည်ရောဂါ exacerbation ကာလအတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။
အဆိုပါ musculoskeletal စနစ်ဖြင့်အလေးအနက်ပြဿနာတွေရှိပါတယ်လျှင်၎င်းသည်လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့၏အခွအေနေဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ပိုမိုဆိုးရွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
မွှငျ့တငျတဲ့အခါမှာဖိအားလမ်းလျှောက်မှရှောင်ကြဉ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
အောက်ပါအမှားများကိုလမ်းလျှောက်၏ technique ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်ဆိုပါကလည်း, ဒီအားကစား, ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်
pubescent ဦးခေါင်း, အဆက်မပြတ်ကြမ်းပြင်မှာညွှန်ကြားထားမျက်စိ;
ခြေနှင့်လက်တို့ကို၏ spasmodic လှုပ်ရှားမှု;
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း 1 သက်တမ်း
ကြံ့ခိုင်ရေး Cindy ခရော
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် L-carnitine ယူနည်း
အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အ midlife အကျပ်အတည်း - ဘယ်လိုရှင်သန်ရပ်တည်သလော
အသီး pomelo - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
သစ်ကြံပိုးနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျားရည် - မည်မျှရက်ပေါင်းသောက်?
မီဒီယာကိုယ်ဝန် Kylie Jenner အပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြ
Cara Delevingne အရေးပါသောဆုံးဖြတ်ချက်ယူပြီးမှ: သူချစ်သူတို့လက်ထပ်!
ဖက်ရှင်လက်သည်း - Fall 2014
ကမ်ဘာပျေါတှငျ dirtiest မြို့
ပလပ်စတစ်ပြတင်းပေါက်၏တောင်စောင်းပေါ်တွင်မှို - ဘယ်လိုစစ်တိုက်ခြင်းလော